Taariikhda haweenka Soomaaliyeed ee ay kula tahay in lagu qoro Wikipedia – Kalfadhi
“Haweenka Soomaaliyeed ee horseeday isbeddelka siyaasadeed, dhaqan iyo dhaqaale” – Tee baad u soo xuli lahayd in lagu soo qoro bogga ugu weyn adduunka ee ay ku keydsan yihiin xogta iyo mowduucyada kala duwan, Wikipedia?
Xogta ku jirta Wikipedia waxay ififaale u tahay nooca adduun ee noo muuqda. Laakiin waxaa bogga ka dhex jirta isku-dheelli-tirnaan la’aan, sida guud ahaan dunidaba ay uga jirto: 90 boqolkiiba kuwa uu macluumaadkooda ku jiro waa rag. Qoraallada ragga ku saabsan waxay afar laab ka badan yihiin kuwa laga qoray dumarka. Haweenka Soomaaliyeed gebi ahaanba way adag tahay in macluumaadkooda halkaas laga helo.
Haddaba noo sheeg magacyada haweenka ay kula tahay in la qoro taariikhdooda. Waxay ka imaan kartaa dhinac kasta oo nolosha ah, sida siyaasadda, ganacsiga, suugaanta, gargaarka, bulshada rayidka ah, warfaafinta iyo adeegyada kale ee la xiriira horumarinta bulshada – waa inay noqoto qof saameyn ku yeelatay bulshada, waxna ka beddeshay noloshooda.
Hoos noogu qor jawaabtaada ama noogu soo dir aragtidaada open4youth@gmail.com